Maxaad ka ogtahay Soomaaliya iyo Soomaalidu? | Somalisan.com
Home Afsomali Maxaad ka ogtahay Soomaaliya iyo Soomaalidu?
Maxaad ka ogtahay Soomaaliya iyo Soomaalidu?
1. Ma ogtahay in nin u yimid Soomaaliya kahor 9000 BC?
2. Ma ogtahay in Somalidii hore ay ahaayeen kuwa ugu horeeyay ee kor u qaadaya oo qurxiyo quruxda sanadka ee 3000 BC.
3. Ma ogtahay in qoraallada iyo qoraallada laga helay mowjadaha Soomaaliya ayan illaa iyo hadda dhicin.
4. Miyaad ogtahay in Sultanate of Caddaalad iyo Boqortooyada Aagga Somalida ay ilaalinayaan islaamiyiinta Islaamka oo ay wax ka qabtaan weerarrada xagjirka ah ee Portugal.
5. Ma ogtahay in Zakaat ee Soomaaliya 150 sano ka hor ay u socotay Jasiiradda Carabta.
6. Ma ogtahay in Soomaaliya ay leedahay munaasabadda Aqalka Eebbe (Kaaba)
7. Miyaad ogtahay in Suldaan Axmed bin Ibraahim, oo ah nin gaas ah, wuxuu dilay Christopher oo ahaa wiilka reer Portugal ee Vascodi Gama.
8. Miyaad ogtahay in suufiyiinta Ummadda ahi ay sadaqaysteen Sultan Ahmad ibn Yusuf al-soomaali.
9. Ma ogtahay in Bortuqiiskii ugu horeeyay ee loo isticmaalo qoryaha ay ka soo horjeedaan Soomaaliya. (Sultanate of Justice)
10. Miyaad ogtahay in Boqortooyada Ingiriisku ahayd markii ugu horeysay ee loo isticmaalo dagaalyahanno ka soo horjeeda Soomaaliya, halkaas oo ay qarxiyeen (Tilih).
11. Ma ogtahay in Soomaaliya ay leedahay xeebaha ugu dheer Afrika.
12. Miyaad ogtahay in Soomaaliya ay ka soo horjeesatay awoodda boqortooyooyinka ugu awoodda badan iyo dalalka adduunka (Portugal, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga, Itoobiya).
13. Miyaad ogtahay in Soomaaliya leedahay kayd wayn oo saliid iyo gaas ah?
14. Ma ogtahay in Soomaaliya ay leedahay maadooyinka ugu qaalisan (birta iyo birta, naxaas, aluminium, kalay, uran, dahab iyo dhagaxyo qaali ah)
15. Miyaad ogtahay in dadka Soomaaliyeed ee Muslim 100/100 iyo waxbarashadiisa Sunni Shafei.
16. Ma ogtahay in Soomaaliya lagu sharfay in ay soo booqato ehelada markii ay saaxiibbadaa ka degeen dekedda Zila ee kuyaalkii koowaad iyo labaad
17. Ma ogtahay in shahiidkii koowaad ee Soomaaliya waa dagaalyahan Yaas Cismaan Taco
18. Miyaad ogtahay in haweeneydii ugu horreysay oo Afrikaan ah ay hoggaamiso diyaarad ay tahay Hassan Abdi oo asalkiisu yahay Soomaali.
19. Miyaad ogtahay in haweeneydii ugu horreysey ee ka tagta diyaarad taariikhda ah waa Mujaahidiinta Jihaad Cabdullaahi Xasan.
20. Ma ogtahay in taliyihii ugu horreeyay ee militariga uu u adeegsaday qoriga Afrika, Sultan Ahmed Ghazi.
21. Miyaad ogtahay in markii ugu horreysay ee furitaanka Boqortooyada Abyssinia ay tahay Sultan Ahmed Elghazi El-Fateh.
22. Ma ogtahay in Battle of the Sea of ​​blood ee Soomaaliya loo magacaabay ka dib markii ay Britian badan oo lagu dilay dagaalka, kuwaas oo dhiig ku daboolay goobta dagaalka.
23. Ma ogtahay in cadawgu uu sheegayo (Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga) oo isbahaysiiyay oo noqday saaxiibo si loo baabi’iyo kacaanka Soomaalida?
24. Ma ogtahay in kacaankii ugu dheeraa taariikhda uu yahay kacaankii 21-jir ee Somaliya.
25. Miyaad ogtahay in Soomaaliya iyo dadkeedu ay dagaal la galeen dagaalkii ugu dheeraa taariikhda, oo bilowday todobo qarniyadood oo 700-sano ah oo ka dhan ah Boqortooyada Abyssinia.
26. Ma ogtahay in magaaladii ugu horreysay ay bilaabantay in ay dhisto muraayado waa Muqdisho, halkaas oo guryuhu ahaayeen afar iyo shan dabaq.
27. Ma ogtahay in Warshadda ugu horeysay u fur oo jare aasaasay magaalada Muqdisho oo la soo saaray si ay Masar iyo Shaam, nooc gaar ah oo dhar maro magacaabay Banader.
28. Ma ogtahay in ganacsatada Soomaaliyeed ay yihiin hoggaamiyeyaasha ganacsiga ee Asia iyo Afrika
29. Ma ogtahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu horreeya ee soo galaya Islaamka.
30. Ma ogtahay in dadka Soomaaliyeed ay si iskood ah u galeen Islaam iyo dagaal la’aan.
31. Ma ogtahay in masaajidka ugu horeysay dhisay Islam waxaa la dhisay ee Soomaaliya, iyo gaar ahaan magaalada Saylac by bin Jaafar Abi Daalib oo isaga saaxiibbadiis ah marka ay degeen Saylac.
32. Miyaad ogtahay in Firfircooniyiinta Soomaalidu ugu yeedheen dalkii Ilaah?
33. Ma ogtahay in Giriiggii qadiimiga ahaa ee loogu yeeray Soomaaliya ee magaca Azaaniya.
34. Miyaad ogtahay in dadka reer Roomaanku ku magacawday Soomaaliya magaca Berberoni.
35. Ma ogtahay in Feereeriyaanka ay Soomaaliya ku magacawday magaca gobolka fooxa.
36. Ma ogtahay ciidammadu Sultan Axmed oo ahaa boqorkii dalka Abyssinia Kalawdiyos iyo taliyaha ciidamada saliibiga ah ee Battle of Christopher Anasi ee 1542 lagu dilay.
37. Ma ogtahay in in 1913, ku dhawaaqay Wasaaradda Great Britain iyo deegaanada ay u barooranayeen dilka taliyaha ciidanka iyo in ka badan oo askari ay Soomaaliya dagaalka ku Dlmadoub markii ugu horeysay taariikhda Britain Great wuxuu leeyahay baroor.
38. Ma ogtahay in Great Britain ay hoos u dhigtay in ka badan 100 bam la duuliyay qalcadda Tilih oo ma dhicin.
39. UK ma ogtahay in kacaankii Somaliya ee uu xukumay hargabka faafa ee la tixgeliyey cudurkaasi wakhtigaas?
40. Ma ogtahay in magaca magaalada Hargeisa ay ka dhigan tahay dhulka hooska iyo waddada Harar?
41. Ma ogtahay in magaca magaalada Berber micnaheedu yahay codka libaaxyada jilicsan, iyo sidoo kale codka biyaha?
42. Ma ogtahay in magaca magaalada ama Bandarkasem Bosasso in aasaasihii ee baayacmushtariga oo Soomaali Qasim bin Ahmed bin Kptanley Herty iyo sidoo kale Bosasso waa magaca geela.
43. Ma ogtahay in magaca magaalada Galkaio macnaheedu yahay in laga eryo Gala.
44. Ma ogtahay in magaca magaalada Muqdisho, taasoo la micno ah saamiga kursiga Shah ayaa Hirzaean oo sidoo kale loo yaqaan qaybta cas boqorradii u talin jiray iyo dameerro in muddo ah muddooyinka.
45. Ma ogtahay in magaalada Kismaayo ay ka dhigan tahay meel aad u fog. 46. ​​Ma ogtahay in suufiyiinta Ummadda ah ay canshuur bixiyaan Suldaan Axmed bin Yuusuf Sultan oo ka tirsanaa Boqortooyada Soomaaliya ee Jaboron …
Qaar ka mid ah laga yaabo in u malaynayaa in tirooyinka iyo khadadka yihiin taariikhda Soomaaliya iyo Soomaalida, laakiinse waa waxyaalahaas oo keliya madaxdii qalimaan line kasta oo loo baahan yahay in bogagga iyo ku qor taariikhda Soomaaliya iyo Soomaalida ma noqon doonto in ku filan isaga mid daabacaadda saxaafadda, ma buugaagta iyo fayl. Taariikhdeenu waa mid aad iyo aad uwanaagsan oo xiiso leh iyo tartamo iyo dhamaystir sheekooyin, dhacdooyin iyo cajiib ah …
Diyaarinta … Abdul Razzaq Soomaali …
Previous articleUrurka Jaamacada Carabta “Xuduudaha Dhulka, cirka iyo badda Somalia waxaa ka masuul ah dowlada federaalka,
Next articleMadaxweynaha Dowlada Hirshabelle Alsayid Maxamed Cabdi Waare ayaa Umaddaha Midoobay kala hadlay Xaalada dadka abaartu ay saameysay, horumarinta Kaabayaasha Dowladda, Dib u dhiska Deegaanada Hirshabelle ( DAAWO SAWIRADA )
WAR-SAXAAFADEED Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Xafiiskiisa Ku Qaabiley Wefti Balaadhan Oo Ka Socday...